“Repealing economic sanctions against Zimbabwe is the only solution to bringing full economic recovery and democratic transition to this African nation,” said Inhofe. “Today, I fully support UN Commissioner Navi Phillay’s belief that economic sanctions are only hurting – not helping – the Zimbabwean people. Over the last four years, Zimbabwe’s power-sharing government has improved the economy and the general wellbeing of its people. This is evident by both the sharp decline of their inflation rate and the improvement of their gross domestic product (GDP). However, with the continuing inability to receive international loans or credits, Zimbabwe’s economy is held back from achieving total fiscal prosperity. Repealing these U.S. sanctions will provide Prime Minister Tsvangirai and his reformers the tools they need to return Zimbabwe to being called the ‘Breadbasket of Africa’ and engineer the transition to democracy that we all seek.”